Imaaraadka Oo Waqti kama Dambays ah U Qabtay Xuutiyiinta ku Sugan Dekadda Xudeydah. – Heemaal News Network
Dawlada Imaaraadka ayaa u qabtay kooxaha Xuutiyinta Yemen waqti kama dambays ah oo ay ciidamadooda ugala baxaan magaalada dekadda leh ee Xudeydah.
Imaaraadka ayaa waxa ay ku hanjabeen in haddii aysan Xutiyiinta ciidamadooda halkaasi kala bixin ay weerari doonaan.
Gargaarka bina’aadanimo ee muhimka ah ee la gaarsiiyo Yemen ayaa waxa uu ka degaa dekadaasi.
Wasiirka arrimaha dibadda Imaaraadka, Anwar Gargash, ayaa BBC u sheegay in isbahaysiga uu dulqaadkii ka dhamaaday gaar ahaan marka ay timaado in arrintan lagu xaliyo qaab dublamaasiyadeed.
Xulafada uu Sacuudiga hogaamiyo ayaa waxa ay horey Xuutiyinta ugu qabteen in muddo 48 saacadood ah ay uga baxaaan Xudeydah.
Horey ayay dowladda Britain u sheegtay in ay isku dayi doonto in ay ku qanciso xulufadada uu Sacuudiga hogaamiyo in aysan weerarin magaalada dekadda leh ee Xudeydah ee dalka Yamen.
Qaramada Midoobay ayaa ka digtay in 250,000 ay naftooda halis galaayso haddii xulufada Sacuudiga ay ku dhaqaaqaan weerar ay ku qadaan dekadda magaaladaasi.